Breaking: सडकैभरी यति धेरै गाडी बोकेर उत्रिए ड्राईभर | प्र’हरीसंग पर्यो घम्सा घम्सी, यस्तोसम्म भयो । (भिडियो हेर्नुहोस्) – Khabar28media
Breaking: सडकैभरी यति धेरै गाडी बोकेर उत्रिए ड्राईभर | प्र’हरीसंग पर्यो घम्सा घम्सी, यस्तोसम्म भयो । (भिडियो हेर्नुहोस्)
July 22, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
काठमाडौँ – ट्याक्सी व्यवसायीले न्यूनतम भाडा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । व्यवसायीले पहिलो चरणको विरोधको कार्यक्रमबाट गर्दै सडकमा ट्याक्सी तेर्स्याएका हुन् । सडकैभरी यति धेरै गाडी बोकेर उत्रिए ड्राईभर | प्रहरीसंग पर्यो घम्सा घम्सी, यस्तोसम्म भयो, हेर्नुहोस् । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
आन्दोलनरत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहले बिहीवार गरेको आमहड्तालको क्रमममा ट्याक्सी जलाएको विरोधमा आज ट्याक्सी व्यवसायीहरुले प्रर्दशन गरेका छन्। शनिवार दिउँसो माइतीघरमा नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा संघले विरोधस्वरुप सडकमा ट्याक्सी रोकेर धर्ना दिए। उनीहरुले राजनितिक हस्तक्षेप बन्द गर,
ट्याक्सी व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर, यातायात क्षेत्रमा गौर कानुनी धन्दा गर्ने चाहिँ उद्यमी, हामी चाहिँ के? भन्ने नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर नारा लगाएका थिए। बिहीवार गोंगबुमा
आमहड्तालमा ट्याक्सी चलाएको भन्दै अज्ञात समूहले प्रदेश ३-०१-००२ ज ५८८१ नम्बरको ट्याक्सीमा आगजनी गरेका थिए। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्रिय
मीटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले दुई दिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जसअनुसार साउन ४ गते बिहान १० देखि ११ तथा ५ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म कलंकी
चोकमा आन्दोलन हुने छ । सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीहरुको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै लामो दूरीका सवारीसाधनको भाडा बृध्दि गर्दा ट्याक्सीको पनि भाडादर कायम गर्नुपर्ने
व्यवसायीहरुको माग छ । ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले व्यावसायिक हितका लागि आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिलसमेत गरेको छ । सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर २८ प्रतिशतसम्मले बढाएपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्रिय मीटर ट्याक्सी व्यवसायी
तथा चालक सेवा समाजले दुई दिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जसअनुसार साउन ४ गते बिहान १० देखि ११ तथा ५ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म कलंकी चोकमा आन्दोलन हुने छ । सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीहरुको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै लामो दूरीका सवारीसाधनको भाडा बृध्दि गर्दा ट्याक्सीको पनि भाडादर कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
Breaking: सडकैभरी यतिधेरै गाडी बोकेर उत्रिए ड्राईभर | प्रहरीसंग पर्यो घम्सा घम्सी, यस्तो भो हेर्नुस ।
Previous Article ३८ दिनको छोरी छोडेर मेरि बास्सैमा हिँड्दा बच्चालाई खुवाइने दूध बाहिर फाल्नुपर्ने हुन्थ्यो (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next Article चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई ? हेर्नुहोस् भिडियो